तिथि मेरो पत्रु » नारीहरूले सिद्ध मानिस के चाहन्छौ?
महिला सधैं आफ्नो जीवनमा मानिस खास-खास गुणहरू छन् चाहनुहुन्छ. सूची धेरै लामो छैन, तर अक्सर यो एक मानिस मा यी सबै गुणहरू पाउन गाह्रो हुन्छ. त्यसैले, तपाईं गुणहरू को बहुमत तल छलफल छ भने, महिला मना र तिनीहरूलाई खुसी बनाउन आफ्नो संभावना ती गुणहरू कमी मानिसहरू भन्दा धेरै हुनेछ.
राम्रो Smell र ड्रेसिङ राम्रो अर्थमा छ
महिला बस खराब गंध मानिसहरूको घृणा. त्यसैले, एक महिला संग बाहिर गएर एक दुर्गन्ध मुद्दा कहिल्यै बिर्सन. सुनिश्चित तपाईं प्रयोग दुर्गन्ध तपाईं मा राम्रो गंध आउँछ. एक अत्तर वा दुर्गन्ध आफ्नो शरीर संग संपर्क मा आने पछि सिर्जना बास्ना एक आफ्नो बास्नाले संयोजन र आफ्नो शरीर बासना छ. त्यसैले, तिम्रो एक मित्र मा ठूलो गंध आउँछ कि एक दुर्गन्ध वा अत्तर तपाईं राम्रो कि गंध बनाउन सक्छ. त्यसैले, एक कोशिश र परीक्षण विकल्प लागि जाने; दुर्गन्ध छनौट गर्दा बुद्धि विजयी गरौं.
महिला पुरुष ड्रेसिङ राम्रो अर्थमा भएको संग हुन प्रेम. सबै भन्दा महिलाहरु को लागि, झुत्रेझाम्रे लुगा लगाएका मानिसहरू ठूलो turnoffs हो. महिला पुरुष सधैं अप-टु-मिति फैशन को रुझान संग रहन र तिनीहरूले लुगा लगाउँछु बाटो परिवर्तन गरेर गरिरहनुपर्छ प्रभावित. तथापि, एक मानिस मात्र उसलाई राम्रो हेर्नु संगठन लगाउने गर्नुपर्छ, आफ्नो शरीर प्रकार पूरकको काम गर्दैन कि छैन केहि प्रयोगात्मक.
परम्परागत पनि सेक्सी हुन सक्छ; यति, तपाईं आधुनिक लुगा लगाएका उत्सुक छैनन् भने, पुरानो बाहिर प्रयास, तर टी र डेनिम जस्तै गलत संयोजन जान सक्दैन (बुद्धिमानी रंग चयन, नीलो डेनिम सधैं राम्रो काम गर्छ).
पारदर्शी हुन, तर पनि धेरै इमानदारी हानिकारक हुन सक्छ सम्झना
महिला सधैं उनको मानिसको जीवन एउटा अत्यावश्यक भाग हुन चाहन्छु; त्यो महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा झूट सहन सक्दैन. त्यसैले, एक मानिस सधैं आफ्नो श्रीमती वा केटी साथी संग एक धेरै पारदर्शी सम्बन्ध कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ. मानिसहरू थिए सबै अनुभव साझेदारी गर्न कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन वा जीवन मा भएको हो, आफ्नो जीवनमा महिला संग असल वा खराब.
तथापि, कहानी मा एक मोड त्यहाँ; तपाईं महिलालाई पारदर्शी हुनुपर्छ, जबकि तपाईं सम्बन्ध मा हो, तपाईं क्रूरता इमानदार हुन वहन गर्न सक्दैन. त्यो भन्दा राम्रो देख छैन पनि जब उनको प्रशंसा गर्न सिक्न; त्यो प्राप्त गरेको छ भने पनि अधिक वजन उसलाई फोन कहिल्यै 10 पाउण्ड; त्यो वास्तवमा छ भने पनि उसलाई खराब कुक बोलाउनु जोगिन. यी सुझाव र तिमी पक्का लागि एक आनन्दित जीवन हुनेछ.
बच्चाहरू प्रेम र वृद्ध मदत देखि नहिचकिचाउनुहोस् कहिल्यै मानिसहरूको जस्तै महिला. अर्को शब्दमा, महिला आफ्नो जीवनमा मानिस दयालु हुन चाहन्छु. राम्रो उदाहरण सेट मानिस हुन प्रयास, उहाँको वरिपरि मान्छे प्रशंसा व्यक्तिलाई, प्राचीनहरूले सराहना को छ जो एक मानिस.
अक्सर मानिसहरू तिनीहरू बलिया छन् भनेर प्रमाणित गर्न द्वेषपूर्ण र निर्दयी हुनुको गल्ती प्रतिबद्ध. लागि महिला बलियो माध्यम हुनुको, चिन्ता र दयालु भएर सुरक्षा गर्न सक्ने क्षमता भएको.
तपाईं यी गुणहरू छ? भने छैन, तिनीहरूलाई विकास गर्न प्रयास; यी गुणहरू विकास सिद्ध शरीर निर्माण वा एक नृत्य कदम सिक्ने भन्दा धेरै सजिलो छ रूपमा तपाईं धेरै प्रयास मा राख्नुपर्छ छैन.
तपाईं गलत भागीदार केलाउँदै हुनुहुन्छ?